LGBT & Human Rights - Yangon Thu Michelle Video
ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မိန်းမလျာ(transgender)၊ ယောက်ျားလျာ(Tomboy)၊ ဂေး(Gay)၊ မိန်းမချင်းကြိုက်သူ(lesbian)၊ ယောက်ျား/မိန်းမနှစ်မျိုးလုံးကြိုက်သူ(Bisexual) အမျိုးမျိုးတွေ့ဖူးမှာပါ။
၁. မွေးကတည်းဖြစ်လာတဲ့ လိင်အင်္ဂါ ဥပမာ – ယောက်ျား/မိန်းမ
၃. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘာ လို့ ခံယူထားလဲ
၄. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘာဆိုတာကို ဘယ်လိုဖော်ပြလဲ
ဥပမာ မီရှဲဆိုရင် မွေးကတည်းက မိန်းမ … ယောက်ျားတွေကို စိတ်ဝင်စားတယ် …. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မိန်းမလို့ ခံယူထားပြီး မိန်းကလေးလို ဝတ်တယ်။ တချို့တွေက မွေးလာတုန်းကတော့ မိန်းကလေးပဲ။ ယောက်ျားလေးလိုနေရတာ ကြိုက်တယ်။ စိတ်ဝင်စားတာလဲ ယောက်ျားလေးပဲ။ တချို့ကလဲ မိန်းကလေးလိုဝတ် မိန်းမလိုနေပြီး မိန်းကလေးပဲ စိတ်ဝင်စားတယ်။
တချို့က မွေးလာတုန်းက ယောက်ျားလေးပဲ။ မိန်းကလေးလို ဝတ်ရတာကြိုက်တယ်။ ယောက်ျားလေးကိုပဲ စိတ်ဝင်စားတယ်။ နောက်တမျိုးကကျတော့ မွေးတုန်းကလဲ ယောက်ျားလေး ၊ ယောက်ျားတစ်ယောက်လိုဝတ်ပြီး ယောက်ျားပဲ ကြိုက်တယ်။
ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ မွေးလာတဲ့လိင်၊ ကိုယ်ခံယူထားတဲ့ လိင်၊ နှစ်သက်စွဲလမ်းတဲ့ လိင်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ဖော်ပြတဲ့ ဖော်ပြချက် …. ဒါတွေကထပ်တူမကျနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခြုံငုံကြည့်မယ်ဆိုလူသားပါပဲ။
ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်၊ အမြင်၊ ရုပ်ရည်ပုံသဏာန်ကို နှိမ့်ချစနောက်တာ မကြိုက်ဘူးဆိုရင် သူများကိုလည်း မစသင့်ပါဘူး။ သူများရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ခံယူချက် ရွှေးချယ်ခွင့်ကို လေးစားသင့်ပါတယ်။ ဘယ်လူမျိုး ဘယ်နိုင်ငံမဆို လူဆိုးလူကောင်းရှိတဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့လူကိုတွေ့ကြုံဖူးတာနဲ့အကုန်မကောင်းဘူးလို့သတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်ရွှံရှာဖယ်ရှောင်နေမဲ့အစားလူကိုလူလို့မြင်လိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားမှာပါ။
June လမှာ ကျရောက်မဲ့ pride month အတွက် တဖက်တလမ်းမှထောက်ခံအားပေးလိုက်ပါတယ်နော် …..
BeingaLGBT is hard in third world country. I asked my friends how they feels and how they experienced. Let’s find out in video .. There are many NGOs that already based in Myanmar to raise awareness for human rights, such as Color Rainbow Myanmar. Please check the link for more information. As I’mahuman right activist, the coming month June is pride month and this video is dedicated to LGBTs and I’m strong support them. Thanks for watching and see you soon.